Vaovao - Ahoana ny fisafidianana ny milina fanaovan-gazety?
Inona no atao hoe milina fanaovan-gazety?
Ny milina fanaovan-gazety (na "milina famindrana hafanana") dia mamindra ny lamina na ny volavola amin'ny entana toa ny T-shirt, pad pad mouse, sainam-pirenena, poketra, mugs, satroka sns sns amin'ny alàlan'ny fotoana, ny mari-pana ary ny tsindry. Ny milina fanontam-pirinty hafanana fototra dia miaraka amina boaty fanaraha-maso maripana tsotra, raha ny milina fanontana hafanana mahery vaika kosa dia manana fifehezana nomerika izay afaka mitahiry fotoana, mari-pana ary tsindry. Afa-tsy ny safidin'ny milina fanaovan-gazety fototra, ny milina fanodinana hafanana dia manome asa hafa toy ny pop-up mandeha ho azy, fanindriana mandeha ho azy, sns., Izay afaka mifanaraka amin'ny fampiharana anao manokana. Antony iray hafa tokony hodinihina ny fampiasana milina famindrana hafanana pneumatic automatique na milina famindrana hafanana semi-automatique hamonjy fotoana sy mpiasa. Araka ny fantatrao, misy fanapahan-kevitra maro raisina rehefa misafidy milina fanodinana hafanana, ary ny tanjonay dia ny hamaly ireo fanontaniana rehetra ireo ao amin'ny bokin'ity mpividy antsipirihany ity!
Inona no karazana milina famindrana hafanana afaka manome ny ilaiko?
Milina fanerena hafanana mivantana
Ny mahazatra indrindra eny an-tsena dia ny milina famindrana hafanana mivantana, izay koa ny mora ampiasaina indrindra ho an'ireo vao manomboka.
Milina lavitra Press Press Machine
Amin'ny alàlan'ny milina famindrana hafanana dia azonao atao ny manisy entana matevina kokoa, ary ny tapany ambony dia afaka mihetsiketsika mba hisorohana ny fahamaizana mandritra ny fametrahana ireo entana, mba hahafahanao manafaingana ny famokarana, hampihena ny fako, ary ho haingana kokoa, azo antoka ary marina kokoa apetraka.
Fa maninona no mifidy Tale?
Yiwu Tale Machines & Spare Parts Facoy dia mpanamboatra masinina sublimation sy kojakoja misy fotodrafitrasa fitiliana ampy fitaovana sy hery matanjaka ara-teknika. Miaraka amin'ny karazany maro, kalitao tsara, vidiny mirary ary endrika am-bolo, ny vokatray dia ampiasaina amin'ny indostria maro. Ny vokatra lehibe anananay dia misy milina famindrana hafanana T-shirt, milina fanontana nomerika nomerika 4-1, milina famindrana hafanana nomerika 6-1, milina famindrana hafanana nomerika 8-1, milina fanontana mug, ary ilay mug mifono mifangaro, mug sublimation, fanovana loko sombin-tsigara, sombin-mozika, sombin-tsarimihetsika ary taratasy fanoratana Ny vokatra rehetra dia eken'ny besinimaro sy atokisan'ny mpampiasa ary afaka mamaly ny filàna ara-toekarena sy sosialy miova tsy tapaka. Tongasoa OEM, faly izahay manolotra milina santionany ary ny baiko kely dia ekena ihany koa. Miarahaba ny mpanjifa vaovao sy taloha avy amin'ny lafim-piainana rehetra izahay hifandray aminay amin'ny fifandraisana amin'ny raharaham-barotra amin'ny ho avy sy ny fahombiazan'ny tsirairay!